Kugara neInvestment yeChile neGolden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuona Kunze Kunze Services muChile ye:
● Kugara nekudyara muChile
● Ugari nekudyara kubva kuChile
● Visa yegoridhe muChile
● Pasipoti yepiri kubva kuChile
● Kugara nekudyara kweChile nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muChile uye Magweta e Kugara neInvestment muChile uye ma broker e real estate Residence zvirongwa muChile zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nenzvimbo dzeInvestment vamiririri veChile vanopa mabasa ekugara nekudyara muChile, Kugara nehurongwa hwekudyara muChile, Kugara nehurongwa hwekudyara muChile, kwechipiri Kugara nekudyara muChile, hunyanzvi hwekugara nekudyara muChile, ugari hwekugara nekugara nekudyara muChile. , Kugara zvachose nekudyara muChile, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muChile, Kugara nehurongwa hwekudyara muChile, Kugara nenzvimbo dzekudyara muChile, Ugari nekudyara muChile, Ugari nezvirongwa zvekudyara muChile, Citizenship nehurongwa hwekudyara muChile, wechipiri Citizenship nekudyara muChile, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara muChile, kugara uye ugari nekudyara muChile, ugari uye ugari nekudyara muChile, hupfumi Citizenship zvirongwa muChile, Ugari nehurongwa hwekudyara muChile, Citizenship nehurongwa hwekudyara muChile, wechipiri pasipoti muChile, yechipiri pasipoti zvirongwa muChile, yechipiri pasipoti purogiramu ndiri muChile, mapasipoti maviri echipiri muChile, pekugara uye pasipoti yechipiri muChile, repasipoti repasipoti repiri muChile, pasipoti yepiri nekudyara muChile, pasipoti yechipiri yevagari muChile, yechipiri pasipoti chirongwa muChile, chechipiri pasipoti zvirongwa muChile, yendarama visa kuChile, visa dzegoridhe muChile, zvirongwa zvegoridhe visa muChile, chirongwa chendarama vhiza muChile, chechipiri vhiza vhiza muChile, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muChile, mbiri yegoridhe visa muChile, ugari uye yendarama visa muChile, kugara uye vhiza yegoridhe. muChile, mugari vhiza mugari muChile, dhiza vhiza scheme muChile, goridhe vhiza zvirongwa muChile.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muChile nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muChile yeResidency nekudyara: USD 2,500,000
Nhanganyaya Chile uye Residence neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveChile
Izvozvi uye zvinobudirira, Chile inokatyamadza pamusoro pemakomo, makomo anopenya, uye hwakawanda hupenyu hwepanyama. Iyo ine kusvetuka kunoshamisa munguva inotonhora yegore uye mipata yakakwidziridzwa mune yekupedzisira gore. Maketani ezvitsuwa nemataundi anonakidza ekuredza anokweretesa kuchamhembe, nepo nzvimbo dzakapamhamha dzerenje dzichitonga kuchamhembe. Nharaunda dzayo dzisina maguta dzemumaguta dzinopa hwaro hwekutanga-hwepasirese, uye masimba eruzhinji anoshamisa kana achienzaniswa nemamwe akarongedzwa uye kazhinji akatsiga mudunhu.
Chile ine diki diki yekudzikisira muLatin America, kungofanana nehupfumi hwakadzika zvakanyanya, hwakanakisa hupenyu, uye hwakanyanya hushoma hwekuda. Unogona kunwa mvura kubva chero pombi iri murudzi, uye ine yazvino foni uye maseru manejimendi, inokurumidza Internet, uye dijitari TV. Migwagwa yakakosha uye yakasarudzika yakatenderedzwa kubva kumusoro kumwe kwekupedzisira kurudzi kuenda kune inotevera.
Maitiro ehupenyu muChile anonyanya kuvimba nekuti iwe unosarudza iro guta kana hupenyu hwenyika, mhepo, uye zvimwe zvakawanda zvemagariro zvinhu. Maguta anopa akawanda akavhurika mikova yekurovedza muviri uye nzira yehupenyu sarudzo. Pane mukana wekuti iwe unoda basa rehofisi, panguva iyoyo, Santiago ndiyo nzvimbo yekuve. Iyo yekugara, yakarongedzwa nebasa nzira yehupenyu ndeyepakati apa kunyangwe kuve mune rakakura guta kunopa akawanda akavhurika masuo ezvekupedzisira-kwebasa kurovedza, semuenzaniso, mabiko, nzvimbo yekushambadzira, uye makirabhu. Rec nzvimbo uye makirabhu ane madziva anowanikwa kune vane simba, hupenyu husingatenderwe nevanhu. Kune zvimwewo nzvimbo zhinji dzekutengesa uye ferias, kana misika yekunze.
Mamiriro manyoro aSantiago anonzwisisika kune akasiyana ekunze kurovedza muviri. Kune nzvimbo dzakasiyana-siyana dzemapaki, kutsvedza mumakomo ari kunze kweSantiago, kushanya kwevanogadzira winery, uye kumwe kurovera kwepanze, semuenzaniso, kufamba, kufamba, uye kunze muCajon de Maipo, iri padyo-nemupata.
Hupenyu hweguta muValparaiso kana mune imwe yemahombekombe eguta kumadokero seLa Serena, Antofagasta, uye Iquique zvakare zvinopa kukwidziridzwa kwemaitiro emahombekombe egungwa senge kusvetuka, kufefetera, kushambadzira, kubata hove, uye kufamba nechikepe.
Hupenyu hwerudzi hunogona kushanduka zvisingaite kuvimba nemweya waunogara. Iyo focal mupata weChile une nzvimbo yeMediterranean uye unofadza gore rese. Maitiro ehupenyu pano akasarudzika neyakareruka, inononoka kufamba kwehupenyu. Mabasa haana kuwanda pano, zvisinei, saka iyi ndima inogona kuve inokwezva kune vanhu vakarega basa kana vanhu vanoshanda kure.
Mamiriro ekunze akanakisa mukati megore rose, rinoenderana nekunakidzwa kwemaitiro mazhinji ekunze, kusanganisira kufamba-famba, kufamba, kukwira, kufamba, kukanyaira, kayaking uye hove. Chaizvoizvo 20% yezvivakwa zveChile zvakachengetedzwa, uye kune makumi matatu nemasere mapaki akapararira mukati merudzi. Mapaki mazhinji anopa kushamisa kwekushanya kwenzvimbo, nzvimbo zhinji dzepasi pevhu, nyanza, nehova.
Rudzi runogara muSouth Chile
Kugara kumaodzanyemba kweChile kunogona kuve kwakasarudzika nekuda kwenzvimbo dzakasiyana siyana. Chivabvu kusvika munaGunyana kunogona kunyorova uye kutonhorera. Iva zvazvingaita, nzvimbo ino ine toni yekuunza patafura. Dunhu remakungwa, kunyanya, rine maonero akanaka pamadziva akapoteredzwa nemakomo akafukidzwa nechando. Fly hove uye murenje chikepe mitambo yekutanga-kirasi kutenderedza uko.
Kukurudzira uye hupenyu hwekupenga hwakapfuura nekumaodzanyemba, uye izvi zvinopindirwa nemhemberero uye zviitiko. Vanhu vari kumaodzanyemba vanozivikanwa nekufarirwa uye kusununguka. Ivo vakasungwa mukati nekushanda kuti vararame uye kwete kurarama vachishanda.
Hupenyu hwemhuri hwakatarisana, uye zvikoro zvinopa akawanda akavhurika masuo enetietwork kurovedza muviri, kunyanya iwo anotenderera kutenderera nguva dzeChile, semuenzaniso, Fiestas Patrias kana guta rega rega riine mota dzaro uye mhemberero.
Matunhu makuru emadhorobha kumaodzanyemba ane rodeos (mutambo wevoruzhinji weChile) nemhemberero dzemagariro dzakazara nehembe dzechivanhu uye cueca inofamba, kutamba kwevanhu. Huwandu hwevanhu hunokura zvakanyanya nguva yekupedzisira yechirimo sevanozorora vachimhanyira kundima yemhemberero dzakawanda dzakapihwa seGerman-nhaka yakamutsa Beer fest. Kune zvakare akawanda marally emigwagwa, mabhasikoro emakwikwi, uye zvechinyakare tsika mhemberero.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeChile
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muChile
Kugara nekudyara kweChile
[Te-7] Visa yevaInvestors
Kutora nguva yekugara nekudyara kweChile
Mushure megore rimwe rekugara kwenguva pfupi
Mushure memakore mashanu ekugara zvachose.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veChile
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweChile
Bhizinesi / Investment
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweChile
Chile ine hupfumi hwemakwikwi muLatin America. Inyika ine hupfumi uye yezvematongerwo enyika yakagadzikana. Nyika inopa yakawanda mikana, uye inokombamira mukukura. Chile inopa inesimba bhizinesi nharaunda kune vese varairidzi.
Mhuri inopinda muChile
Vanovimba nemunyoreri anosanganisira mukadzi, vana nevabereki vanogona kuverengerwa muchikumbiro.
Kugara nehurongwa hwekudyara muChile insite
Kutanga iwe uchafanirwa kutora vhiza yenguva pfupi iyo inobvumidza iwe kugara uye kushanda munyika kwegore rimwe chete. Mushure menguva iyoyo unokodzera kunyorera vhiza yekugara zvachose kana uchikwanisa kuchengeta mari yekudyara mubhizinesi. Iwe unofanirwa zvakare kupa humbowo hwekugara munyika kwenguva shoma yemazuva zana nemakumi masere neshanu nekubhadhara mutero wese. Mune fomu rako rekunyorera iwe unofanirwa zvakare kuisa tsamba inozotaura kuti sei iwe uchida kuve mugari wechigarire weChile. Mvumo yekugara zvachose inovandudzwa uye inoshanda kwemakore mashanu. Iwe unogona kunyorera kuti uve mugari wenyika mushure mekuguma kwenguva iyoyo. Iyo zivo yetsika uye nhoroondo yenyika, uye ruzivo rwemutauro zvinosungirwa. Kuti uwane pekugara zvachose uchafanirwa kugara munyika kwenguva pfupi yemwedzi mitanhatu. Mwedzi mitanhatu iyoyo haifanire kuteedzana. Nekudaro, cherekedza kuti kana iwe ukagara kunze kweChile kweanopfuura mazuva zana nemakumi masere, hauchakwanise kuwana kugara zvachose. Iko hakuna kudikanwa kwekuvapo panyama munyika, iwe unozongofanirwa kuve unogara munyika kanenge zuva rimwe chete mukati megore. Iwe unozokwanisa kusvetuka izvo zvinodikanwa, kana iwe uchizonyora fomu nemumiriri weChile kunze kwenyika, iyo inofanirwa kunyorwa mazuva makumi matanhatu pasati pasvika nguva yekupera kweiyo yekare fomu. Mune ino kesi iwe unogona kukurebesa iwe kusavapo kubva munyika kwemakore mana akateedzana. Ziva kuti chikonzero chako mune iyi kesi chinofanira kuratidzwa.
Mari inodiwa kuChile
Ivo avo vanoda kutanga bhizinesi muChile vanofanirwa kuisa mari shoma pa $ 60 000 USD. Iko kudyara kunofanirwa kuitwa mukati memwedzi mitatu yekubvumidzwa kwekugara kwenguva pfupi. Iwe unofanirwa kutanga kambani yako ichangogadzwa kuitira kuti uwane kugara zvachose. Kambani yako inozotariswa nekutarisirwa nehurumende, nekuti inofanirwa kuzadzisa zvimwe zvinodiwa. Iko kune mukana wekuitika wekuwedzera mari nekuda kweichi chiitiko chekushandisa.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweChile
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents eChile uye Residency ne Investment Lawyers yeChile inopa vatengi uye mhuri dzavo muChile nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuChile, kugara nekudyara kubva kuChile nedzimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira pekugara nekudyara kubva kuChile kana Golden Visa kubva kuChile kana ugari nekudyara kubva kuChile kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuChile, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Chile kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muChile uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuChile uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veChile:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeChile, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zveChile, inokwanisika mari yekushambadzira vanopinda munyika yekuChile, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuChile, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara eChile uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa kambani yeChile
Kugara nekudyara kubva kuChile kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muChile kuenda ku37 Nyika.
Citizenship nekudyara kubva kuChile kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuChile kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuChile kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuChile.
Goridhe visa zvirongwa muChile kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuChile kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuChile kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuChile kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweChile kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muChile nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muChile, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweChile. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muChile vane rondedzero yakanaka uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka muChile, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveChile nekudyara muzvivakwa muChile.
Unoda kuziva - Chile Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reChile rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuChile. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara neInvestment kuChile inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti ubve kuChile kana kuChile, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweChile kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeChile uye kudzora njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira chirevo cheChile, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuChile isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuChile. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweChile uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuChile zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neChile.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweChile changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muChile kune vanhu vataurwa pasi apa kana mabhizinesi muChile:
Residency nebasa rekudyara kuChile hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vagoveri vemaoko nema ammunitions kubva kana kuChile.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveChile hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muChile kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuChile.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweChile hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muChile.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeChile haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muChile.
Residency nebasa rekudyara kuChile haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhaoloya kana zvombo zvenyukireya muChile.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweChile haruwanikwe kune vanhu veChile vanobata mukutengesa, kuchengetedza muChile, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeChile haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeChile hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muChile.
Residency nebasa rekudyara mu Chile haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muChile.
Kugara Kwedu magweta muChile haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muChile.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veChile neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muChile kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muChile.
Kugara nekudyara muChile nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muChile yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muChile.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neChile zviri pamutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kweChile inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheChile.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuChile kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuChile.
Zvakaitika Kugara nevekutsvaga mari kuChile uye vamiririri veChile vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veChile vanobata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuChile uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuChile
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Chile, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuChile kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuChile
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweChile ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba yakakura yevatengi veChile, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweChile uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeChile
Maitiro Ekubvumidza Chibvumirano kuChile
Kwekugara kwenguva pfupi muChile
Permanent Residence muChile
Embassies uye maCommulates eChile
Kugara neInvestment muChile uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuChile kune izvozvi kana zvichauya zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuChile nekudyara, isu semumwe wako kuChile, tiripo kuti tipe yakawanda mamwe masevhisi uye uye kana paungangoda muChile nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweChile, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muChile, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veChile ichitigadzira one-stop shop yeChile nenyika 106.
"Takasimudzira makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuChile mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweChile nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro muChile nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muChile kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muChile inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muChile
Chero ani investor anotamira kuChile angazoda account yako yebhangi muChile uye account yebhangi yekambani muChile, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muChile
Kana iwe uchida kubvunza muChile, ye mhinduro dzemadhijitari muChile senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muChile kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Chile kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muChile kutanga pakarepo muChile.
HR Services muChile
Our kambani yevashandi muChile inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muChile vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeChile
Bhizinesi foni masystem eChile pamwe ne nhamba dzeChile Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muChile
Accounting, kushingairira kwakakodzera muChile uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muChile
Setup bhizinesi muChile
Mushure meResidency nekudyara kuChile, setup bhizinesi mu Chile.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muChile
Webhu Kugadzira muChile
Ecommerce Kuvandudza muChile
Webhu kuvandudza muChile
Kubudirira kweBlockchain muChile
App Kubudirira muChile
Software Kubudirira muChile
Magweta eResidency neInvestment muChile
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuChile uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuChile, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeChile ine vamiririri vekunze vanoendawo muChile, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi kushandira ruzivo rweChile ne kujekesa nzira dzekudyara dzekugadzirisa vanhu veChile nemhuri dzavo. Kugara kwedu neboka rekudyara kuChile kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuChile, pamvumo yako yekugara muChile inogamuchirwa.
Simba regweta reChile rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muChile. Kana iwe uri muChile kana waronga kushanyira Chile, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuChile kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeChile. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weChile.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muChile
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muChile?
Kugara nekudyara kuChile, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweChile kuburikidza nekudyara mune hupfumi hweChile kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuChile, kugara nehurongwa hwekudyara kweChile inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kweChile, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muChile, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muChile uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuChile, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiririri vezvekudyara muChile, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muChile.
Kugara nemabasa ekudyara eChile | Kugara nenzvimbo dzekudyara muChile | Kugara nemagweta eInvestment muChile | Kugara nemagweta ekudyara muChile | Kugara nevanoona nezvekudyara kuChile
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muChile?
Ugari nekudyara kuChile, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweChile kuburikidza nekudyara muhupfumi hweChile kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muChile. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuChile, ugari nehurongwa hwekudyara kweChile inotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara masevhisi eChile, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muChile, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara muChile uye hunhu hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kuChile, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muChile, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muChile
Affordable Investor yekufambisa mabasa eChile | Vanodhura vanotamira kune dzimwe nyika vanokumbira muChile | Vanodhura vatyairi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muChile | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muChile | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muChile | Affordable immigration law firms kuChile
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muChile?
Yechipiri pasipoti muChile, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weChile kuburikidza nekudyara muhupfumi hweChile kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuChile, yechipiri pasipoti chirongwa cheChile chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eChile, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muChile, magweta echipiri epasipoti muChile uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eChile, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muChile, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muChile.
Chechipiri pasipoti masevhisi eChile | Chechipiri pasipoti vamiririri muChile | Yechipiri mapasipoti magweta muChile | Yechipiri mapasipoti magweta muChile | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuChile
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muChile?
Ndarama vhiza muChile, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeChile kuburikidza nekudyara muhupfumi hweChile kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuChile, chirongwa chendarama vhiza yeChile inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eChile, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muChile, akanakisa egoridhe vhiza magweta muChile uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veChile, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muChile, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muChile.
Ndarama vhiza masevhisi eChile | Ndarama vhiza vamiririri muChile | Magoridhe vhiza magweta muChile | Magoridhe vhiza magweta muChile | Goridhe vhiza vanopa mazano kuChile
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muChile?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muChile kuri USD 2,500,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuChile yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muChile nevamiriri muChile vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muChile.
Kugara nekudyara kuChile kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuChile uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuChile ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeResidency neInvestment kuChile, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuChile kana investor visa kuChile?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuChile kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuChile kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuChile kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuChile kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuChile kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuChile kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuChile kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuChile kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuChile kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuChile kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuChile kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeChile
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuChile
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeChile
Kugadziriswa kwemakomo muChile
Gobierno de Chile-Hurumende yeChile.
Nhoroondo Quarter yeSeaport Guta reValparaíso
National Library yeChile
Kodzero Dzevanhu: Chile
Misión Permanente de Chile an Naciones Unidas
Economist.com | Nyika Kusvikira: Chile
Dare reMakurukota eChile-Iyo Dare reVakuru veChile
Mumiriri weChile muUS
Global Legal Information Catalog: Chiri
Iyo World Factbook - Chile
Diario Oficial de República de Chile Santiago de Chile
Mutemo Raibhurari yeCongress Kutsvaga: Chile
Madiplomatic Misheni yeChile Abroad
Ministry of Kunze- Ministry of Foreign Affairs yeChile.
Senado de la República de Chile-I Seneti yeRepublic of Chile ndiyo imba yepamusoro yeChile bicameral Congress
Nhaka Yenyika: Chile
Nhoroondo yeBritain Nyika: Chile
Presidencia de la República de Chile-Mumwe Mutungamiriri weChile.
Link to Dhipatimendi Rekupinda muChile , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muChile